मेस्सी अब कता ? - Khelpati
बिहिवार, भदौ ११, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । स्टार फुटबलर खेलाडी लियोनल मेस्सीले समर ट्रान्सफरमा बार्सिलोना छाड्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार ३३ वर्षीय फरवार्डले क्लबलाई एक फ्याक्स पठाए, र क्लब छाड्ने बताए ।
उनले फ्याक्समा क्लबको सम्झौताबाट आफुलाई मुक्त गर्न अनुरोध गरे । यसका लागि उनले सम्झौतामा राखिएको एक शर्तलाई उल्लेख गर्दै आफुलाई रिलिज गरिदिन भनेका हुन् ।
तर बार्सिलोना भने शर्तको समय समाप्त भएको मान्छ । उसले अब मेस्सीको क्लबसंगको सम्झौता सन् २०२१ सम्म रहेको दाबी गरेको छ । मेस्सीको अनुबन्धनमा ७ सय मिलियन युरोको एक शर्त समेत उल्लेख छ ।
यस बिषयलाई लिएर मेस्सी र क्लबबीच कानुनी लडाँई चल्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ । मेस्सीको अनुबन्धनमा जुन शर्त छ, उनले जुन १० अघि जानकारी गराए लागू हुने अवस्था थियो ।
बार्सिलोनाले अब मेस्सीले क्लब छाड्न सक्ने समय घर्किसकेको बताएको छ । क्लबको बोर्डलाई विश्वास छ, उसले कुनैपनि कानुनी लडाँई जित्न सक्नेछ ।
तर मेस्सी र उनको टिम भने कोरोना भाईरसका कारण सिजन अगष्टसम्म बढेको कारण यस शर्तको समय सिमा समेत अगष्टसम्म बढ्ने दाबी गर्छ ।
विवाद हेर्दा यस बिषय अदालतमै गएर टुङ्गिने देखिएको छ । चाँडै क्लबको बोर्डले यस बिषयमा निर्णय लिनेछ ।
केहीलाई लाग्छ, एक चिजले मात्र मेस्सीको बहिर्गमन रोक्न सक्छ, त्यो भनेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउको राजीनामा र जति सक्दो चाँडो क्लबको चुनाव ।
मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय जुन हालतमा लिएपनि खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै बार्सिलोनाका प्रशंसक नाउ क्याम्प बाहिर भेला भएर मेस्सीको समर्थन र बोर्डकोबिरुद्धमा प्रर्दशन गरे ।
मेस्सीले कीर्तिमानी ६ पटक फिफा वालेन डी ओर जितेका छन् । उनले चार पटक क्लबलाई च्याम्पियन्स लिग जिताएका छन् । उनले बार्सिलोनामा सन् २००४ बाट फुटबल करियर सुरु गरेका थिए ।
भर्खरै च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाईनलमा बायर्न म्युनिखसंग ८–२ ले पराजित भएपछि मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
मेस्सीलाई बार्सिलोनाले छाड्ने अनुमती दिएको खण्डमा मेस्सील कुन क्लबबाट खेल्छन् ?
एक कुरा प्रष्ट छ, विश्वका सबै क्लब मेस्सीलाई आफ्नो क्लबमा अनुबन्धन गर्न चाहन्छन् । तर उनलाई क्लबमा राख्न सजिलो छैन, विश्वका केही क्लबमात्र यसको सामथ्र्य राख्छन् ।
मेस्सीसंग एक विकल्प छ, उनी अर्जेन्टिना फर्किने । आफ्नो शहर रोजारियोको क्लब नेवेल्स ओल्ड बाँयबाट खेल्ने ।
उनी सधै भन्ने गर्थे, आफ्नो स्कुले दिनको क्लब नेवेल्सबाट सन्यास लिनु अघि पुन खेल्न चाहन्छु ।
तर मेस्सीले सुरक्षालाई लिएर चिन्ता ब्यक्त गर्छन् । आफ्ना तीन बच्चाको सुरक्षा चिन्ताका कारण उनलाई अर्जेन्टिना जान रोकेको हो ।
मेस्सी धेरै बर्ष ईङ्लिस फुटबलका प्रशंसक रहेका छन् । उनी प्रिमियर लिगको बारेमा राम्रो जानकारी समेत राख्छन् । सोही कारण उनी म्याचेष्टर सिटी जाने सम्भावना रहन्छ ।
निश्चित रुपमा उनी पेप ग्वार्डीओलाका कारण सिटी जान सक्छन् । यसका साथै उनी फेरा सोरियानो र टिक्ककी बेगिरिस्टेनका कारण समेत सिटी पुग्ने लाख काटिएको छ ।
दुवै खेलाडीले यसअघि बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए । ग्वार्डीओला बार्सिलोनाको प्रशिक्षक रहिसकेका छन् । र उनी एक स्पेनिस म्यानेजर हुन् ।
म्यान्चेष्टर सिटी यस्तो क्लबमा पर्छ, जो मेस्सीको अपेक्षा अनुसार पैसा दिन सक्छ । दोस्रो कुरा पेप यस्तो रणनीति बनाउन सक्छन्, जसमा मेस्सी उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सक्छन् । पछिल्ला केही बर्ष मेस्सीले बार्सिलोनामा त्यो गर्न सकेका छैनन् ।
स्पेनबाट प्राप्त पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार सिटीले मेस्सीका लागि म्यान्चेष्टर युनाईटेडसंग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्पेनको राष्ट्रिय टेलिभिजन नेकवर्क कुआट्रोका अनुसार युनाईटेड मेस्सीलाई अनुबन्धन गर्न गम्भिर प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।
योसंगै चेल्सी, लिभरपुल र आर्सनल समेत मेस्सी अनुबन्धनका लागि ठुलो रकम खर्च गर्न तयार हुन सक्छन् ।
मेस्सीका बच्चा बार्सिलोनाको बाहिरी इलाकामा रहेको ब्रिटिस स्कुलमा पढिरहेका छन् । सोही कारण उनका लागि ईङ्ल्याण्डको विकल्प राम्रो हुन सक्छ । यसका लागि उनको परिवारले नयाँ परिवेशमा धेरै समस्या भोग्नु पर्ने छैन ।